ရေခရားထဲ ပန်းအလှစိုက်နည်းစာအုပ်ထဲက ၀ါကျသုံးကြောင်းကိုထဲ့ပြီး စံပယ်ပန်းတွေကို လောင်းလိုက်တယ်
မနက်ဖြန်တော့မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဦးမှ ကိုယ်ဟာကြည့်မှန်မှာ တွေဝေ
အဝေးကဘူတာရုံတခုမှာစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့မီးအိမ်ဝါ ဝေါကနဲ နောက်ထပ်ဝေါကနဲ
ကျယ်ဝန်းတဲ့ဒီအသံဟာ အခိုက်အတံ့ပဲဆို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပစ္စုပ္ပန်တဲ့တဲ့ဟာလည်း ကျယ်ပြန့်ပါတယ်
မိန်းကလေးရဲ့တဇတ်ဇတ်တုန်ယင်နေတဲ့နှုတ်ခမ်း လူသားဘ၀အဦးအစ နီတာရဲ
အချစ်ဟာဆန်းကြယ်တယ် ဒါပေမယ့် သချာင်္ဟာလောဂျစ်မှာဂိတ်ဆုံးတာပဲ
ငါလိုချင်တာလွတ်လပ်မှုနဲ့ တန်းတူညီမျှမှုမဟုတ်ဘူး တရားမျှတမှု ဒီတခုထဲပဲ
ညဟာလူတွေကိုပြန်သိမ်းတယ် အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ကြိုးစားတာမှာ ဘာဆန်းကြယ်တဲ့အတွေးအခေါ်မှ
မလိုဘူး အိမ်ပြန်ရမယ် ငါတို့ ကိုယ်တို့ အိမ်ပြန်ကြမယ် အိမ်မှာလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်မလား
“စံပယ်တွေ စံပယ်တွေ မသေသေးချင်အောင်တဖြေးဖြေးအဆိပ်တက် မနက်ခင်းခန်းလုံးပြည့်ထောင့်တိုင်းနှံ့”
Posted by KZကေ at 22:21 No comments:
ဘာအမျိုးအစားပါလိမ့် ဒီသင်္ခါရ သေလျှင် စိတ်ဝင်စားစရာမရှိတော့
ဒီအင်အေဆိုလား ဇီဝအင်ဂျင်နီယာပညာ ပဲအားကိုးတော့မယ်
လူသားရဲ့အသိဥာဏ်ဟာမပြည့်စုံသေးတော့ တကယ် ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မယုံချင်တော့
ကိုယ်ဟာ သစ်ရွက်နဲ့အရှက် ပေါက်ဆိန်နဲ့အသက်ကို သမိုင်းဦးဘုံမြေစံနစ်ကစပြီး သိတယ်
ခုဒိတ်ဒိတ်ကျဲ အရင်းခေတ်ကြီးရောက်တော့ ဖက်ရှင်ကောင်းရင် အိုင်ပက်ရှိရင် ဘဇူကာရှိရင် ၄၂လက္မရှိရင် ဗီဇာနဲ့မာစတာ ရှိရင် ဘ၀ဟာနေသာထိုင်သာပဲဆိုပြန်တော့ ပြန်တွေးမိတော့ ရယ်စရာပါ
ကြိုးမဲ့ အိစက်စက်အတွေ့အထိဟာ အ၀အပြဲ စဉ်းစားစရာ နာရီချိန်သီးနဲ့ကားဝိုက်ဘာ
ကိုယ်လား ကျည်တောက်အကောက်မတွေ့လို့ အမြီးကို ဘာနဲ့မှမစွပ်ဖြစ်တော့
အ၀ါဆိုရင် ပြင်ချင်တဲ့ ၀ါကျတွေကိုချယ်သဖို့ ပိတောက်ပန်းပဲ
နှစ်သစ်ကူးမှာ နွမ်းသွားတဲ့နေကြာပန်းပဲ (ဗင်ဂိုးဆိုတာဘယ်ကသူငယ်လည်းကွဲ့)
ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်းနားချပါတယ် ရှဉ့်လည်းပစ်သာ ပျားလည်းဖွပ်သာ ဆိုမကောင်းလား
ကဲ ဘာသောက်မလဲ ဘာဖြစ်ချင်သလဲ ချယ်နယ်၄၀၀ကျော်ရှိတယ် အိုဗာတင်းရှိတယ်
မျက်စိ နား နှာ လျှာ ကိုယ် စိတ် ရှိတယ် ကာမဂုဏ်ကိုထုံဆေးပေးဖို့မဟုတ်ဘူး
ဝေဒနာကိုကြည့် ဒါဏ်ရာကိုမကြည့်နဲ့ ခင်ဗျားကို တရားချနေတာလည်းမဟုတ်ရပါဘူး
အသက်ရှင်ဖို့ အစားရေစာဝလင်ဖို့ ဖီလော်ဆိုဖီ ဖတ်ဖို့ လိုလို့လား ကိုယ်တော့နောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရတော့ဘူး
အမှန်တရားကိုပက်လက်လှန်ပြီး ကြမ်းပိုးကို လိပ်လိုထား
သူ့ဘက်မဟုတ်တဲ့ ကိုယ့်ဘက် ကိုယ်ယက်ရင်း ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်
ခင်ဗျားအမြင်ကို လေးပင်သော ထင်မြင်ချက်များလည်း မပေးလိုတော့ ။
Posted by KZကေ at 20:27 No comments:
စာဖတ်နေတာကများနေပြီး ဖတ်နေသောစာများကိုစိတ်ထဲမှာလုံးလိုက်၊ အလုပ်၊ လူမှုရေး၊ မိသားစု၊ အသင်းအပင်း အစရှိသည်.......
သားနှင့်သမီး ပြီးတော့ သည်အရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ဖေဖေတခုခုလုပ်နိုင်ဦးမည်ဟု
Posted by KZကေ at 21:552comments:
တနေ့ ကျွန်နုပ်လည်းအားအားရှိသဖြင့် အိအိရှားတို့အိမ်ဘက်လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပေသည်။
အိအိ။ ။ ဟယ် ဆရာကြီးပါလား။ ဘယ်ကလှည့်လာတာလဲ။
မိမိ။ ။ နင်တို့အိမ်ပဲတမင်ထွက်လာခဲ့တာ
အိအိ။ ။ အထူးအဆန်းပါလားဆရာကြီးရယ်။ ဘာများထူးလို့လဲ။
မိမိ။ ။ ဘာထူးမှာလဲဟာ။ ဒါကဒါပဲပေါ့။
အိအိ။ ။ ဟာ ဆရာကြီးဟာကလည်း ဘာနားလည်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။
မိမိ။ ။ ဘာနားမလည်စရာရှိသလဲ။ ဒါကဒါပါဆိုနေမှ။ နင်တို့ကလည်းတဆိတ်ရှိနားမလည်တာနဲ့၊ ပို့စ်မော်ဒန်တွေဆိုတာနဲ့၊ ခံစားလို့မရတာနဲ့။ ဘာတွေရေးမှန်းပြောမှန်းမသိဘူးဆိုတာနဲ့။ ဒါဆိုငါပြန်တော့မယ်။
အိအိ။ ။ ဘလိုင်းကြီးပါလားဆရာကြီးဟာက။ ကဲပါ ရောက်လက်စနဲ့တော့ ကော်ဖီလေးဘာလေးသောက်ရင်း လက်ရှိကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းလေးဘာလေးပြောသွားပါဦး ဆရာကြီး။
မိမိ။ ။ နင်တို့ကတော့ဒါပဲ။ တွေ့ရင်မေးမယ်ဆိုတာချည်းပဲ။ ငါကလည်းဆရာမလုပ်ရမနေနိုင်ဆိုတာမျိုးနဲ့ တော့တွေ့ပြီပေါ့။
အိအိ။ ။ အာရပ်အကြောင်းလေးစပါလားဆရာကြီး။
မိမိ။ ။ ယူအေအီးအရင်ကအသွားများတယ်။ အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းပေါ့။ ခုတော့ ကာတာ၊ ဆော်ဒီ၊ ဘာရိန်း ရွှေတွေမရောက်တဲ့နေရာမရှိ သလောက်ပါပဲ။ ဈေးတွေကတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဟာ။ သတိထား နင်တို့ဂွင်ရိုက်တဲ့ကောင်တွေနဲ့တွေ့ဦးမယ်။
အိအိ။ ။ အာ၊ ဆရာကြီးကတော့လုပ်တော့မယ်။ ရှိုးဂျော့မဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီ၊ ဒီမှိုကရေစီ။ အရေးထဲလျှာတောင်လိပ်တယ်။
မိမိ။ ။ အံမယ်နင်ကအလာကြီးပဲ။ ငါကဒါတွေသိပ်သိတာတော့မဟုတ်ဘူး။ တတိယလှိုင်းတို့၊ စတုထ္ထမလိုင်တို့၊ ပဉ္စမမျိုးဆက်တို့ ဆဋ္ဌမအာရုံတို့ အလကားဟာတွေပါဟာ။
အိအိ။ ။ လုပ်ပါဆရာကြီးရယ်။ ဆရာကြီးရွှီးရင် နားထောင်ကောင်းပါတယ်။ တူနီးရှားကစပြောပါနော်။
မိမိ။ ။ အေးငြိမ်ငြိမ်နားထောင်။ ဟိုမေးဒီမေး လူကြီးမျက်နှာပျက်နိုင်တာမျိုးတွေရှောင်။ ဒီလိုဟ၊ ဘွဲ့ရတွန်းလှည်းအရောင်းသမားလေးရဲ့လှည်းကိုစည်ပင်ကသိမ်းတယ်ဆိုလား။ ပြောရရင်တော့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးပဲဟ၊ လူနေမှုစရိတ်ဒါဏ်ကိုကုန်းခံနေရသူတွေအများကြီးရှိနေသလို၊ နိုင်ငံရေးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုနဲ့ လေယာဉ်လပေးစီးနိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိနေကြတယ်။ ဒီလိုမကျေနပ်ချက်တွေအပြင် လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုရေးသားခွင့်ဆိုတာတွေမလုပ်နိုင်ဘူး။ ပြဿနာက အဲဒီကနေ ကိုင်ရိုကိုကူးတယ်။
အိအိ။ ။ သူတို့တော့အဆင်ပြေသွားသား။ ဘင်အလီကော မူဘာရက်ကော အောင်ဖေနော်ဆရာကြီး။
မိမိ။ ။ အဲ ဘာရိန်း၊ ယီမင်၊ ဆီးရီးယားနဲ့ လစ်ဗျားရောက်တော့ဇတ်လမ်းကတမျိုးပြောင်းလာတယ်ဟ။ ပွဲကတော်တော်နဲ့မပြတ်ဘူး။ လစ်ဗျား၊ ယီမင်ဟာ ပြည်တွင်းစစ်ကိုကူးသွားပြီ။
အိအိ။ ။ ကြားတယ်ဆရာကြီး၊ ကဒါဖီဆိုသူ့တိုင်းပြည်ထဲတောင်ပြန်ဗုံးကြဲတယ်ဆို။
မိမိ။ ။ ဒီလူကနဂိုထဲကခပ်ကြောင်ကြောင်။ အရင်ကဆို ကဗျာတွေဘာတွေတောင်ရေးဆိုပဲ။ ဟုတ်မှာပေါ့ဟာ ကဗျာဆရာဆိုတာတွေကလည်းအနဲနဲ့အများကြောင်ကြတာကလား။ အဲအဲ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ အဲဒီအရှိန်က ဂျော်ဒန်၊ အိုမန်နဲ့ ကူဝိတ်အထိရောက်တယ်။ သို့သော်ရုန်းရင်းဆန်ခတ် တော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ရှေ့ကတိုင်ပေးတဲ့ နှစ်ခုက တို့အရေးအော်ပြီးရင် နောက်ဆုံးတခုကို အောင်ရမည်အော်ရမယ် ဆိုတာမျိုးနဲ့ ပြီးသွားကြတယ်။
အိအိ။ ။ လုပ်တော့မယ်ဆရာကြီးကတော့။
မိမိ။ ။ တော်လှန်ရေးဆိုတာ မကျေနပ်မှုကစတာ။ ဒါဘယ်သူငြင်းမလဲ။ မကျေနပ်မှုဆိုတာက လက်တွေ့ဘ၀ကလည်းလာနိုင်တယ်။ ဆန်ဈေးကြီးတော့ထမင်းတနေ့နှစ်နပ်မစားနိုင်တာမျိုး။ ပြီးတော့စိတ်ကူးသို့ လူမှုဝန်းကျင်တွေကလည်းလာနိုင်တာပဲ။ ကိုယ်စိတ်ကူးရေးသားပြောဆိုမှုကိုလူထဲချပြခွင့်မရတာမျိုး။
အိအိ။ ။ ဟုတ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ဝထ္ထုစာအုပ်နာမည်ဆို ပိတ်ခံရတယ်။
မိမိ။ ။ ဘာမို့လို့ဘာလိမ့်ဟာ။
အိအိ။ ။ ချစ်ချစ်ကတော့ နေ့ချစ် ညချစ် အချိန်ပြည့်ချစ်မှာပဲ တဲ့ ဆရာကြီး။
မိမိ။ ။ အေးဟာ ဒီလောက်ရင်ခုန် မိန်းမောဘွယ်ကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ကျမှဖြစ်ရပလေ။ ကဲထားတော့။ စောစောကပြောတဲ့အခြေခံလေးတွေဟာ၊ လက်တွေ့မပြေလည်မှုနဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ဒီအခြေခံ အချက်အလက်တွေဟာ လူတယောက်ရယ်လို့ ရခဲတဲ့ ဒုလဘ္ဘမှာ ရပိုင်ခွင့်လေးတွေပဲ။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ၊ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရရင် လူသားမှာ မွေးလာကတည်းက သဘာဝအလျှောက်ကိုခံစားခွင့်ရှိရမဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေဆိုတာတကယ်ရှိသလား မရှိဘူးလား၊ ဒီအပေါ်မှာတချို့သဘောထားတွေမတူကြဘူး။
အိအိ။ ။ ဆက်ပါဦးဆရာကြီး
မိမိ။ ။ ငါတို့ဘယ်ဘက်ရပ်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစာကြည့်ရအောင်။ ငါတို့မှာလူသားတယောက်အနေနဲ့ သဘာဝအလျှောက်ရပိုင်ခွင့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာရှိသလား။ ဒီကစစဉ်းစားမယ်။
အိအိ။ ။ ဟုတ်ကဲ့
မိမိ။ ။ တချို့က လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဥရောပ ဥာဏ်အလင်းခေတ် ရဲ့တီထွင်မှုတဲ့ ဒီ့အရင်ကမရှိဘူးတဲ့။ အခွင့်အရေးတို့ တာဝန်တို့ဆိုတာ အဲဒီခေတ်နောက်ပိုင်း ကျမှပေါ်လာတဲ့စကားလုံးတွေဆိုတယ်။
အိအိ။ ။ ဒါဆို ဒီစကားလုံးတွေက ဂျွန်လော့ခ်တို့ သောမတ်စ်ဟော့ဘ်တို့ ရူးဆိုးတို့ ဟျုမ်းတို့ ကန့်တို့ ကစပြော ကြတာလား။
မိမိ။ ။ ကန့်ကစစ၊ ဒုတ္ထာကစစ။ ဘယ်သူကစပြောပြောပေါ့ဟာ။ အတွေးအခေါ်တခုဟာ နောက်ကျမှစလို့ ယဉ်ကျေးမှုမဖွံ့ဖြိုးသေးချိန်ကမရှိသေးလို့မို့ လူသားမှာဒီရပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာတော့ဘယ်ဖြစ်သင့်မလဲ။
အိအိ။ ။ အင်းလေ။ လူသားချင်းညှာတာမှုဆိုပြီးဝင်အကူအညီပေးမဲ့ပေါ်လစီတွေ၊ မူတွေဟာ ဒီတိုင်းဆိုအလကားဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။
မိမိ။ ။ အောင်မယ်၊ ညည်းကလဲမခေပါလား။
အိအိ။ ။ ဆရာကြီးတပည့်ပဲ ဆရာကြီးရယ် ဒါတွေဒီလိုတော့ရှိတာပေါ့။
မိမိ။ ။ ရှေ့ဆက်မသွားခင်ရှင်းအောင် ဘက်၂ဘက်ရှိနေတယ်ဆိုတာမှတ်ထားဖို့လိုမယ်။ တမျိုးက လူသားရဲ့မွေးရာပါအခွင့်အရေးဆိုတာမရှိဘူး။ အချိန်ကာလဒေသပေါ်မူတည်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ အရ လူမှုသဘောတူညီချက် (Social Contract) ပေါ်မူတည်ပြီးရှိနေတာ။ ဒါက တရုတ်တွေပြောလေ့ရှိတာမျိုး။ အာရှတန်ဖိုးတို့၊ အာရှယဉ်ကျေးမှုဟာ ဖခင်ကြီးအယူအဆ ဘက်ယိမ်းတယ်ဆိုတာတွေပေါ့။ အစ္စလမ်မစ်ဝါဒီ တွေရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်မှာလည်းဒီသဘောမျိုးဆင်တာတွေရှိတယ်။
အိအိ။ ။ နောက်တမျိုးကတော့ ယူနီဘာဆယ်လူ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်။
မိမိ။ ။ ဟုတ်တယ်။ ကျင်စိန်ရော မာမွတ်ရော၊ မေရီကော၊ အစ္စဘဲကော၊ အဗဒူလာကော၊ ဖထီးကော၊ အမိုးကော၊ ဆလိုင်းကော၊ နိုင်ကျင်ထန်းကော ဖိုးခွေးကော အားလုံးလူ့အခွင့်ရေးရှိရမယ်။ ငပိစားစား၊ ပေါင်မုန့်ကိုထောပတ်သုတ်သုတ်၊ အသားညှပ်ညှပ်၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပဲသောက်သောက်၊
အိအိ။ ။ ရပါပြီဆရာကြီးရယ်၊ မောနေပါဦးမယ်။ လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး စားသုံးနိုင်ပါသည် ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။
မိမိ။ ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ ငါပြောတာဆုံးအောင်နားထောင်။ နင်ဝင်ပြောတာ ဒန်ပေါက် ကြော်ညာ နဲ့တူသွားပြီ။
အိအိ။ ။ ဆရာကြီး ကိုစကားထောက်ပေးတာပါ။
မိမိ။ ။ တရုတ်တွေက ကွန်ဖျူးရှပ်အားကိုးနဲ့ဒါကိုတင်တာ။ ကွန်ဖျူးရှပ်ကအချက်၂ချက်ပြောခဲ့တယ်။ တစ်က လူမှုအစုအဝေး (Community) ဟာအခြေခံယူနစ်တဲ့။ နှစ် ဒီယူနစ်ထဲလူတဦးချင်းစီက၀င်ပူးပေါင်းဖို့ဆိုတာ တန်ဖိုး၂ခုကိုဂရုစိုက်ရမယ်။ ရင် နဲ့ လီ လို့ဆိုတယ်။
အိအိ။ ။ အဓိပ္ပါယ်လေးလုပ်ပါဦးဆရာကြီး။ ဘာလဲ ရင်နဲ့တင်ဆိုတာ။
မိမိ။ ။ ရင်နဲ့လီ ပါဆိုနေမှ၊ နီးစပ်အောင်ပြောရရင် ဆန္ဒ ren (virtue of care) နဲ့ မျှတမှု li (virtue of balance) လို့ဆိုတယ်။ အကကိုနမူနာပေးပြီးရှင်းတယ်။ လိုရင်းကတော့ လူတယောက်ဟာသူ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်၊ အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး ဆန္ဒကိုမျှတမှုနဲ့ပေါင်းစပ်နေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘော။ နင်ပြောချင်တာလျှောက်ပြောလို့မရဘူး။ လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ် ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ဆိုတာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ငြိမ်မှုကိုငဲ့ရမယ်ဆိုတာမျိုး။
အိအိ။ ။ တရုတ်ကကွန်ဖျူးရှပ်ဆိုတော့ အစ္စလမ်တွေက မိုဟာမက်ပေါ့နော် ဆရာကြီး။
မိမိ။ ။ ဟုတ်တယ်။ သူတို့မှာ အူမာ (Umma) ဆိုတာရှိတယ်။ လူမှုအစုအဝေးကိုပဲပြောတာ။ မတူတဲ့ကိုးကွယ်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုတွေ အတူယှဉ်နေနိုင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ်ကကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုပဲပြောနေလို့မရဘူး။ လူတိုင်းက ကိုယ့်ယုံကြည်မှု အယူဝါဒကို ဦးစားပေးပြီးပြောနေ မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လက်ခံထားတဲ့အချက်ကို သူများအယူအဆထက်သာတယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်နေရင် မဖြစ်ဘူး။ ဒီတော့ အပေးအယူလုပ်နေနိုင်ရမယ်။ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ညှိယူရတာ။ ငါ့အခွင့်အရေးငါလွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ပြောဆိုမယ်ဆိုတာမျိုးမရဘူးတဲ့။ ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်း တပြေးညီလူ့အခွင့်အရေးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတယ်။
အိအိ။ ။ သူတို့ပြောတာလည်းဟုတ်သလိုလိုပဲနော်။
မိမိ။ ။ အေး။ ဒီလိုသဘောတူညီမှုတွေနဲ့ အပေးအယူတဲ့ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ တည်ငြိမ်တယ် သာယာတယ် ဆိုရင် ငါလည်းသဘောတူတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် လူမှုအစုအဝေးတွေမှာအဲသလိုထိမ်းကျောင်းနိုင်တဲ့ အစွမ်းမရှိဘူး။ သဘာဝအရကို မျိုးကွဲ တွေရှိလာရင် အားသာမှုတခုကတော့လိုလာတာပဲ။ လိုချင်လာကြတာပဲ။
အိအိ။ ။ ဒီတော့ လူသားအားလုံးတပြေးညီရှိသင့်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာသတ်မှတ်ဖို့လိုလာတယ်လို့ ဆရာကြီးလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့။
မိမိ။ ။ ဒါပေါ့ဟ။ မဟုတ်ရင် အားကြီးတဲ့ကောင်က အားနည်းတဲ့ကောင်ကို လုံခြုံရေးတို့ တည်ငြိမ်မှုတို့ဗန်းပြပြီး ဒါမပြောနဲ့ ဟိုဟာမလုပ်နဲ့ ဒီကောင်တော့ပြန်လွှတ်လို့မဖြစ်သေးဘူး ဆိုတာတွေလုပ်ကုန်မှာပေါ့။ အကြောင်းပြကောင်းအောင်ရှာပြီး အင်အားနဲ့ထင်ရာလုပ်တော့တာ။
အိအိ။ ။ မှန်လိုက်လေဆရာကြီးရယ်။
မိမိ။ ။ ဒီတော့ ယနေ့ အာရပ်ကမ္ဘာနဲ့မြောက်အာဖရိက အုံကြွတော်လှန်ရေးတွေမှာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ရင် အာဏာရှင်တွေဟာ တရားဥပဒေကြောင်းအရအာဏာပိုင်အစိုးရနဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်လူ့အဖွဲ့အစည်း ဆိုတာတွေကိုရွေးရမယ်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာမရှိဘူး။ လူတွေဟာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ ထဲဒီလိုပဲညှိနှုိင်းနေထိုင်သွားကြရတာပါဆိုရင်တော့ နိုင်ငံရေးစားပွဲဝိုင်းပေါ်မှာအဖြေရှာမလား။ လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်မလား။ ပြည်တွင်းစစ်လား။ တခုခုတော့ရွေးရမှာပဲ။
အိအိ။ ။ ရှင်းတယ်၊ ရှင်းတယ်။ ဆရာကြီး ကကောဘာသဘောကျသလဲ။ ဘယ်ဘက်ကလဲ။
မိမိ။ ။ ငါတခုပြောချင်တယ်။ နင်ကိုယ့်ဘာသာပြန်မေးကြည့်။ နင်ကအားကြီးသူဘက်မှာရောက်နေတယ်။ အားနဲသူတွေကို လူတွေမွေးလာကတည်းကဘာတန်းတူအခွင့်အရေးမှမရှိဘူး။ အခြေအနေအရဒီလိုပဲအဆင်ပြေသလိုသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုပဲလက်ခံထားကြရတာဆိုပြီး သူတို့ကို ကြည့်ကောင်းအောင်ပြောပြီး ကိုယ်ထင်ရာလုပ်နေတာကို တရားတယ်သတ်မှတ်ပြီးနေမလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကအားနဲသူဘက်မှာရှိနေတယ်။ အားကြီးသူက စောစောကလိုဆင်ခြေတွေပေးပြီး အခုလိုငါတို့ပြောသလိုနေ၊ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာမထိုက်ရင်မရသေးဘူး။ အချိန်တန်တော့ နွားပိန်ကန်လိမ့်မပေါ့လို့ပြောပြီး နင်ကထမင်းမ၀လို့အဟာရပြတ်နေချိန်မှာ သူတို့ကနိုင်ငံခြားဈေးဝယ်ထွက် ဆေးကုသွားနေတာမျိုးကိုလက်ခံမလား။ ငါ့ရဲ့ဘယ်တုန်းကမှန်းမသိတဲ့ ဘ၀ပေးကုသိုလ်ပဲ၊ ကံမကောင်းလို့ဆိုပြီး ဘယ်မှာမှသုံးမရတဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးနဲ့ ငြိမ်ခံနေမလား။ သူများတွေစလို့အဆင်ပြေတယ်ထင်မှနောက်က ၀င်ယောင်မှာလား။ နင်ကငါစမဲ့အချိန်စောင့်နေချိန်မှာ ငါကလည်းနင်စမဲ့အချိန်စောင့်နေလို့ကတော့ နေ့ဘက်ကုန်းလုပ် ညဘက်ကိုရီးယားကားကြည့်ပြီး သေမဲ့အချိန်စောင့်ကြဖို့ပဲ။
ငါတို့ ဒါကိုပြတ်အောင်တွေး၊ ဆုံးဖြတ်၊ တဘက်ဘက်ကတိတိကျကျရပ်၊ ဒဿနလိုလို ။ နတ်ကသလိုလို၊ အူကြောင်ကြားအတွေးအခေါ်တွေဖယ်ထုတ်။ တကယ်အလုပ်လုပ်ကြရမဲ့အချိန် ရောက်နေပြီ။
ငါတို့ လူဖြစ်လာရတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ လူသားဂုဏ်ရည်ကို ပြန်ရယူဖို့အချိန်ရောက်နေပြီ။
Ref. Are there natural human rights? IHT May 29’ 2011
Posted by KZကေ at 22:43 No comments: